Zava-bavaka 70 amin'ny Fototra diso | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Zava-bavaka 70 eo amin'ny Fototra diso
Zava-bavaka 70 eo amin'ny Fototra diso
26 Ary Josoa dia nanendry azy tamin'izany andro izany hoe: Ho voaozona eo anatrehan'ny Tompo izay mitsangana sy manorina ity tanàna Jeriko ity, ary izy no hametraka ny fanorenany amin'ny lahimatoany, ary amin'ny zandriny indrindra no hananganany ny vavahadin'ny izany.
Lesoka fototra azo faritana ho anomaly ao amin'ny fianakaviana. Ny fototra diso dia zavatra mampidi-doza tokoa, mpino maro no mijaly mafy amin'ny fiainana noho ny zavatra tsy fantany. Rehefa diso ny fototranao dia manana safidy hafa ianao fa tsy maintsy mitolona amin'ny fiainana. Misy olona sasany izay rehefa teraka izy ireo, dia natokana ho an'ny andriamanitra sasany amin'ny taniny. Ireo zaza tsy manan-tsiny ireo dia mihalehibe rehefa tsy mahalala na inona na inona momba ny fototra na ireo andriamanitra. Satria tsy fantany ny momba ireo andriamanitra ireo dia tsy ivavahany izy ireo, vokatr'ity tsy fahalalany ity dia lasa iharan'andriamanitra ireo. Betsaka ny fianakaviana izay voafantina hanompo sampy sasany nandritra ny taranaka maro, ary ny tsy fanatanterahana izany dia hitarika amin'ny fahafatesana na amin'ny karazan'aretina rehetra. Tena mahatsiravina izany. Fa anio, rehefa mampiditra ireo teboka vavaka miisa 70 isika amin'ny fototra tsy misy fotony, dia hitako Andriamanitra manafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fototra ratsy rehetra dia azo raikitra, fa ny vavaka no ilaina. Tsy maintsy mivavaka tsy mitsahatra ianao fa tsy maintsy mivavaka fa tsy reraka. Mba hialana amin'ny fototra diso, dia tsy maintsy mivavaka amin'ny làlana miala amin'i satana rehetra ianao. Tsy vavaka iray monja na dia iray aza dia vavaka hatrany. Tokony hanohitra tsy tapaka amin'ny devoly ianao mandra-pahafahana. Ity vavaka ity dia manondro ny lesoka diso dia hanome ny làlana hivoahana tanteraka. Tsarovy izany, zavaboary vaovao ianao ary mahalala fifandraisana amin'ny devoly amin'ny fiainanao taloha. Mivavaha amin izany fahatakarana izany ary jereo ny tenanao mandehandeha malalaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Ray ô, misaotra anao aho fa nanao fandaharana mba hanafahana ahy amin'ny karazana fanandevozana amin'ny anaran'i Jesosy
2. Ekeko ny fahotako sy ny razako, indrindra ireo fahotana ireo mifandraika amin'ny fahefana ratsy amin'ny anaran'i Jesosy
3. Manarona ny ran'i Jesosy aho.
4. Manafaka ny tenako amin'ny fanandevozana fototra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Tompo ô, alefaso ho fototry ny fiainako ny famaky anao, ary aringano ny fambolena ratsy rehetra.
6. Avelao hivoaka avy amin'ny rafitrao ny ran'i Jesosy isaky ny lova satanika nolovaina, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Manafaka ny tenako tsy ho azon'ny olana nateraky ny reniko aho, tamin'ny anaran'i Jesosy.
8. Avelao ny ran'i Jesosy sy ny afon'ny Fanahy Masina manadio ny taova rehetra ao amin'ny vatako, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Izaho dia mivadika sy manafaka ny tenako amin'ny fifanarahana ratsy nolovaina rehetra, tamin'ny anaran'i Jesosy.
10. Izaho dia mivadika sy manafaka ny tenako amin'ny ozona ratsy rehetra nolovaina, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Manosika ny fatiantoka ratsy rehetra izay nokolokoloiko tamin'ny naha-zazakely ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Mandidy ny matanjaka rehetra mifatotra amin'ny fiainako aho mba ho ringana, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Aoka ny tsorakazo ratsy fanahy hitsangana hanohitra ny ankohonako mba tsy hanan-kery noho ny amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Hanafoana ny vokatry ny anarana ratsy teo an-toerana aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Ny voka-dratsy manimba ny fananana ny fananana vady maro no mifehy ny fiainako ary diovina amin'ny fanorenako, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Ianao, ny fikasana ara-batana ratsy, mialà amin'ny fanorenako amin'ny anaran'i Jesosy
17 Ry ozon'ny ray aman-dreny, mivoaha amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
18. Mialona amin'ny mpifaninana ianao, mivoaha amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
19. Ry fanoloran-tena ratsy, mialà amin'ny fanorenako amin'ny anaran'i Jesosy
20. Miara-miombona amin'ny sampy eo an-toerana ianao, miala amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
21. Ry filana demonia, mivoaha amin'ny fototra iorenako amin'ny anaran'i Jesosy
22. Ry mpivady demonia, mivoaha eo amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
23. Manonofy ny fahalotoana avy amin'ny fanorenako amin'ny anaran'i Jesosy
24. Ianao izay mametra-tanana amin'ny tananao, mivoaha amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
25. Ry voaozona demonia, mivoaha amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
26. Miaraka amin'ny sampy fianakaviana ianao, mivoaha amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
27 Ry fanombohana demonia, mivoaha amin'ny fototra iorenako amin'ny anaran'i Jesosy
28. Nandova ny fahalemena ianao, mivoaha amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
29. Diso fanararaotana amin'ny firaisana ara-nofo ianao, mialà amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
30. Ianao no mizaka ny mpanao sikidy ratsy, mivoaha amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
31. Ry rà mihosin-dra, miala amin'ny fototra niorenako amin'ny anaran'i Jesosy
32. Ry fanovana demonia amin'ny lahatra, mivoaha eo amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
33. Miara-miasa amin'ny mpanolotsaina demonia ianao, mivoaha amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
34 Ry fombafomba tsy araka ny Soratra Masina, mialà amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy
35 Ry fanahy razamben'ny olona, ​​mandehana avy amin'ny fototry ny anaran'i Jesosy.
36. Manasaraka ny tenako amin'ny ràn'i Jesosy aho, avy amin'ny hetsika sivily, dia manadio ny tenako aho anio amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Manitsakitsaka ny fanekempihavanana nolovaina tamin'ny razako aho tamin'ny lafiny ray sy reny, amin'ny anaran'i Jesosy.
38. Ray ô, ambarako anio fa ny fototra iorenako dia ao amin'i Kristy Vatolampy amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Mandidy ny afon'Andriamanitra handrehitra sy handoro ny lavenona rehetra, ny vorona ratsy rehetra, ny menarana, na biby hafa rehetra mifatotra amin'ny aiko amin'ny alàlan'ny fikambanana ratsy, amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Hofoanako ny sakantsakana rehetra, ny sakana na ny fanakanana rehetra apetraky ny fikambanana ratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
41. Ny varavaram-pitahiana sy ny zava-bita rehetra dia mihidy amiko amin'ny fikambanana ratsy rehetra, mandidy anao aho mba hosokafana amin'ny anaran'i Jesosy.
42. Tapako sy manafoana ny ozona rehetra nolovaina, amin'ny anaran'i Jesosy.
43. Tompo ô, esory amiko ny ozona rehetra apetraka amin'ny razamben'ny razambe vokatry ny fandraisany anjara tamin'ny fikambanana ratsy, amin'ny anaran'i Jesosy.
44. Izaho dia mivadika sy manafoana ny ozona rehetra napetraky ny ray aman-dreniko, amin'ny anaran'i Jesosy.
45. Tapako sy manafoana ny ozona rehetra, tsipelina, hex, enchantment, bewitching, incantation izay napetrako tamin'ny alalàn'i satana, tamin'ny anaran'i Jesosy.
46. ​​Izaho dia manapaka sy manaisotra ny fanekena ny ra sy ny fehintsoratra rehetra sy ny fiantsoana mifamatotra amin'ny mpaka satana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
47. Nodioviko ny tenako amin'ny sakafo ratsy rehetra izay nohaniko tsy nahalala na tsy nahatsiaro tena tamin'ny ran'i Jesosy ary manadio ny tenako amin'ny afon'ny Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jesosy.
48. Ny fanahy demonia rehetra mifamatotra amin'ny fifanekena ary ozona rehetra eo amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako, ampatsoboky ny afon'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
49. Nambarako fa faritra tsy misy aleha ho an'ny fanahy ratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, ny fiainako.
50. Tompo ô, avelao ny faritra rehetra amin'ny fiainako hiaina ny fahagagana ataonao? Amin'ny herin'i Jesosy
51. Tsy mandà ny fandrika natsangan'ny fikambanana ratsy ratsy aho tamin'ny anaran'i Jesosy,
52. Mialà sy manafaka ny tenako rehetra amin'ny fifaneken'i satana hatramin'ny fahazazako amin'ny anaran'i Jesosy.
53. Izaho dia mivaky sy manala ny tenako avy amin'ny satanika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
54. Izaho dia tapako sy manafoana ny fanekena rehetra misy amin'ny sampy sy ny zioga mifikitra aminy, amin'ny anaran'i Jesosy.
55. Izaho dia manapaka sy manafoana ny fifanarahana ratsy nataon'ny ray aman-dreniko ho ahy sy ny zioga rehetra miraikitra aminy, amin'ny anaran'i Jesosy.
56. Mandidy ny afon'Andriamanitra aho hamoaka ny herin'ny maizina hiady amin'ny faratako, amin'ny anaran'i Jesosy.
57. Tompo, avelao ny Fanahy Masina hahomby amin'ny fidaboka avy hatrany amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
58. Niaiky aho fa hijanona maharitra mandrakizay ny famonjena ahy tsy ho voavadika intsony, amin'ny anaran'i Jesosy.
59. Aoka ny mpanafika ratsy rehetra tafintohina sy ho lavo, amin'ny anaran'i Jesosy.
60. Ray ô, misaotra anao nahatonga ny fahavaloko rehetra hanao fahadisoana izay hampivoatra ny fitoriako, amin'ny anaran'i Jesosy.
61.Misaotra anao noho ny nandefa fisafotofotoana tao amin'ny tobin'ny mpanolo-tsaina ratsy rehetra rehetra izay mikasa ny handrosoako, amin'ny anaran'i Jesosy.
62. Ray ô, misaotra anao nitondra ny maizina tao an-tobin'ny fahavalo, tamin'ny anaran'i Jesosy.
63. Ray ô, misaotra anao nanala ny anarako tamin'ny boky tsy fahombiazana ary tamin'ny fanakanana demony, tamin'ny anaran'i Jesosy.
64. Raiko ô, omeko anao noho ny nanomezany ahy hery hampiasa ny fotoana masina natolotra ahy tamin'ny anaran'i Jesosy
65. Ray ô, misaotra anao nahatonga ny fahavalona rehetra tsy latsak'izay nahamenatra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
66. Ray ô, misaotra anao fa nanafaka ahy tokoa tamin'ny anaran'i Jesosy
67. Ray ô, misaotra anao aho noho ny nanomezany ahy hery hamatorana mandrakizay amin'ny menarana sy maingoka amin'ny anaran'i Jesosy.
68. Ray ô, misaotra anao nandresy ny heroda rehetra tamin'ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy.
69. Ray ô, misaotra anao nanapoaka ahy tsy tapaka tamin'ny fototry ny fahadisoako tamin'ny anaran'i Jesosy.
70. Misaotra ny Tompo noho ny valin'ny fivavahanao.
Previous lahatsoratra70 Ny vavaka fanafahana dia manondro ny herin'ny helo
Next lahatsoratraZava-bavaka 100 mba handresena ireo fitsapana sy fahoriana
Eseohe 25 Janoary 2021 Amin'ny 1:38 hariva
Misaotra an'ity vavaka ity
Hunphry sunny 9 Febroary 2021 Amin'ny 5:26 maraina
Misaotra an'ireo teboka vavaka mahery.
Andininy ao amin'ny Baiboly 20 momba ny famelan-keloka
Teboka vavaka hanoherana ny fahafatesana tampoka amin'ny 2021
Fomba 5 handresena ny tahotra amin'ny maha mpino
30 Ireo vavaka tokony ho amin'ny ambaratonga manaraka